Godot, iyo yakavhurwa sosi yemutambo injini yakagadziridzwa kuita vhezheni 3.3 | Linux Vakapindwa muropa
Godot, iyo yakavhurwa sosi yemutambo injini yakagadziridzwa kuita vhezheni 3.3
Mushure memwedzi mitanhatu yekuvandudza, Godot 3 yemahara mutambo injini yakatangwa.3 iyo yakakodzera kugadzira 2D uye 3D mitambo. Bazi reGodot 3.3 inoenderana zvizere naGodot 3.2 uye inoenderera ichikudziridza shanduro dzakagadzikana dzeinjini, idzo dzinozopihwa refu rutsigiro.
Pakutanga, pachinzvimbo chaGodot 3.3, zvainge zvakarongerwa kuburitsa iyo yekuvandudza 3.2.4, asi iwo mavhezero e3.2.x akaonekwa nevashandisi sekugadzirisa, kunyangwe ichitaridza maficha matsva kubva kubazi re4.0, saka chirongwa chakachinjira kuchirongwa chechirongwa chekare semantic. .
Kunyanya kugadzirisa iyo yechitatu manhamba ikozvino kunoratidza kuvepo kwekugadziriswa chete, yechipiri, kuiswa kwekushanda kutsva uye kwekutanga, kuvapo kweshanduko dzinokanganisa kuenderana. Bazi re3x rinoteverwa rakafanana ne4.xx kusvika Godot 4.x yasimbiswa zvizere uye yakashandurwa kune ese aripo Hardware.
1 Main nyowani maficha eGodot 3.3
2 Tora Godot
Main nyowani maficha eGodot 3.3
Mune iyi vhezheni nyowani, seyakanyanya kutsva, zvinomira pachena kuti ine ndakagadzirira a edhiyo vhezheni inoshanda muwebhu browser.
Zvakawedzera zvakare kugona kuburitsa mitambo yeiyo Android chikuva muAAB fomati (Android App Bundle), pamwe neAPAP mapakeji. Iyo AAB fomati inobvumira kurodha chete maaraibhurari eko anodiwa kushanda pane chazvino chishandiso (semuenzaniso, armeabi-v7a kana arm64-v8a).
Zve Android, iko kugona kupinza zvinhu zvinoenderana neiyo Godot injini muchimiro chezvidimbu-zvikamu zvinoshandisa chikamu chehwindo zvinoitwawo mukushandisa, kuwedzera kune kuwedzera kwekutsigirwa kwenzvimbo dzisingaone dzechidzitiro (kutenderera uye notches yeiyo kamera), mbeva zviitiko, uye zvekuisa kubva kune yekunze keyboard.
Iyo API nyowani yakurudzirwa kuti igadzire uye igovane plugins yeIOS, iyo inokutendera iwe kufambisa plugins (ARKit, GameCenter, InAppStore) kune yakasarudzika dura uye wozvigadzira ivo vakazvimiririra neiyo Godot injini Iyi API yakamboitwa kare kune Android chikuva.
Imwe shanduko yakakosha yaive mu webhu vatambi vekunze (HTML5) yakagadziridzwa sekuvandudzwa uye rutsigiro rwemakhibhodi uye mapikicha emitambo akagamuchirwa, kuwedzera kune zvakare akagamuchira rutsigiro rweGDNative uye yakawanda kuverenga zvinyorwa zvemitambo inomhanya mubrowser, asi nekuda kwekukanganisa kwepuratifomu yeHTML5, kuitiswa kwayo hakuenderane nesarudzo dzemitambo yemuno. Zvakare, iko kwekumisikidza kuita kwakasungirirwa kune iyo SharedArrayBuffer API, iyo isingawanikwe mumabhurawuza ese. Iyo yakawandisa kuverengas zvakare inowedzera rutsigiro rweAudioWorklet APIque inobvumira zvirinani odhiyo kuburitsa Pasina kuvhara rukova rukuru.
Kune rimwe divi, tinogona kuzviwana akawedzera rutsigiro rwekugadzira mitambo ye Apple's new hardware yakagadzirirwa chip M1 ARMS, pamwe nerutsigiro rwakawedzerwa rwekubatanidza masiginecha edhijitari kune mafaera ekugadzirisa akagadzirwa macOS.
Kubva bazi 4.0 yemazuva ano API yakaendeswa pamusoro kuronga multithreading, iyo inoshandiswa nekwanisi yeC ++ 14 standard inoshandiswa, kuvimbika kwebasa pamapuratifomu akasiyana kwakawedzerwa, uye kugadzirisa mashandiro akaitwa.
Kugadziriswa kwebazi 4.0 kwafambiswa iyo inoshandisa BVH (Bounding Vhoriyamu Hierarchy) chimiro panzvimbo yeOctree nzira yesimba nzvimbo yekuparadzanisa panguva yekupa. BVH ikozvino ndiyo yekumisikidza uye inogadzirisa nyaya zhinji dzekuita.
Kuitwa kwakabatana kwe 2D batch kugadzira (batch kugadzira, optimization kudzikisa kudhonza kufona uchifunga nezve chimiro chinzvimbo chezvinhu) inoshandiswa, iyo inogona kushandiswa kune ese OpenGL ES 3 uye OpenGL ES 2. Iyo optimization pachayo ikozvino inovhara zvimwe zvinhu, kusanganisira mitsara nemapoligoni.
Wakawedzera nyowani nyowani mepu anovaka (lightmapper), iyo inoshandisa nzira yekutsvagisa nzira uye inotsigira kudzikisira ruzha uchishandisa oidn (Vhura Mufananidzo Denoise) raibhurari. Iyo nyowani lightmapper inoshandisa maPCU ekushandisa komputa uye inogadzirisa akawanda ehunhu matambudziko anowanikwa mune yekare mutongi.
Iyo OpenXR plugin yakawedzerwa nerutsigiro rwechiyero chezita rimwe chete kuti igadzire chaiyo uye yakawedzerwa chaiyo kunyorera. Iyo HTML5 port yekugadzira mitambo inoenderana neyakajeka chaiwo matekinoroji yakawedzera rutsigiro rweWebXR kududzirwa.
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa izvo zvinyorwa Mune inotevera chinongedzo.
Godot inowanikwa kuti utorwe pa peji ino yeWindows, Mac OS uye Linux. Iwe unogona zvakare kuiwana pa chiutsi y itch.io.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Godot, iyo yakavhurwa sosi yemutambo injini yakagadziridzwa kuita vhezheni 3.3
Fedora 34 inosvika mushure mevhiki yekunonoka neGNOME 40 sekukwezva kwayo kukuru
MuSe 4.0 inosvika neyakagadziridzwa mushandisi interface uye nedzimwe shanduko